Nintendo ichaburitsa mimwe mitambo gore rino | IPhone nhau
Mushure mekutanga mutambo wayo wekutanga we iPhone, Miitomo, rudzi rwekudyidzana kushamwaridzana neshamwari, Nintendo iri kupedzisa kugadzira mitambo inotevera inosvika pane zvishandiso zveIOS neApple gore rino. Kusiyana neMiitomo, kambani yeJapan lichatanga mafranchise matsva emitambo inozivikanwa senge Animal Crossing uye Fire Emblem. Iyo kambani yakangozivisa zvido zvayo kuburikidza ne tweet.
Kunyangwe Animal Crossing, iyo isiri mumutambo mumwechete neSuper Mario, ndiyo ichave yekutanga kuburitswa kwe mutambo wakabudirira padanho reNintendo izvo zvichazosvika kune nhare mbozha. Iyi vhezheni nyowani ye Animal Crossing haizombovepo pane chero eanyaradzo ayo kambani inogadzira parizvino kana pamapurojekiti emangwana ayo airi kushanda, senge Nintendo NX.
Chishoma chimwe chatinoziva nezvemitambo mitsva iyi, sezvo iwo madhiri ari mashoma uye Nintendo haisi mubhizinesi rekushandira pamwe nekuzarura zvinangwa zvaro remangwana zvirinani kusvikira zuva rekuburitsa rasvika. Kunyangwe Miitomo yakarongedzwa nevashandisi vazhinji semutambo usina maturo, vazhinji ndivo vashandisi vakaurumbidza asi vakamirira nekusuwa kusvika kwemazita ehupenyu hwese, chimwe chinhu chisingapfuure nemusoro wekambani yeJapan. Nintendo anoronga kuburitsa mimwe mitambo mishanu kusvika Kurume gore rinouya.
Vamwe vashandisi vane hanya nekusunungurwa kweNintendo kuri kuuya sezvingangodaro wedzera kutenga-mu-app kunokanganisa ruzivo rwekutamba kubva kushanduro dzakapfuura. Mazuva mashoma apfuura Nintendo akazivisa kuti purofiti yayo yakanga yadonha ne60% zvichienzaniswa negore rapfuura, nekuda kwekudonha mukutengesa kwezvinhu zvawo, mamiriro ayo ayo anoda kudzosera kumashure nekutanga iyo Nintendo NX gore rino, mairi kushanda kwemakore akati wandei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Nintendo kusunungura mimwe mitambo gore rino
Kutanga mavhidhiyo emukati meiyo nyowani Apple Campus 2